DRK 310 mmiri vepo Nzipu Rate Tester - China Shandong Drick Instruments
DRK 310 mmiri vepo Nzipu Rate Tester
DRK310 mmiri vepo Nzipu Rate Tester bụ professionally ọdabara na mmiri vepo nnyefe ọnụego ule nke plastic film, mejupụtara film, fere, akwado ihe nke Solar, metal foil, waterproof mpịakọta, plastic, roba, akwụkwọ, iko, metal na ngwaọrụ ndị ọzọ na-eji na ọgwụ na ahụ ike, nri, akwa na akpụkpọ anụ. Site anwale mmiri vepo nnyefe ọnụego, teknuzu index nke ihe nwere ike na-achịkwa izute ndị a chọrọ maka mmepụta. Product atụmatụ Gravimetric ule meth ...
DRK310 mmiri vepo Nzipu Rate Tester bụ professionally ọdabara na mmiri vepo nnyefe ọnụego ule nke plastic film, mejupụtara film, fere, akwado ihe nke Solar, metal foil, waterproof mpịakọta, plastic, roba, akwụkwọ, iko, metal na ngwaọrụ ndị ọzọ na-eji na ọgwụ na ahụ ike, nri, akwa na akpụkpọ anụ. Site anwale mmiri vepo nnyefe ọnụego, teknuzu index nke ihe nwere ike na-achịkwa izute ndị a chọrọ maka mmepụta.
Gravimetric ule usoro;
Standard oge erikpu usoro na akpaaka efu n'ihu onye ọ bụla erikpu di na ziri ezi na otu ụdị nke ule data
Big LCD ihuenyo dynamically egosiputa ule data, PvP akara panel
akwụsị ule gburugburu ebe obibi bụ dị ka ahụ dị ka ibu gburugburu ebe obibi iji zere ọrụ njehie;
Micro-na kọmputa akara ule na ngwaọrụ na PC nyochaa dum ule usoro, nke dị elu akpaaka.
High-nkenke nke ule na gburugburu ebe obibi akara usoro: mgbe nile okpomọkụ akara na iru mmiri nchịkwa;
Special soft kpo oku imewe zere ujo nke nkịtị kpo oku ngwaọrụ ahụ;
Top elu ezi ihe mmetụta iji hụ na izi ezi nke ule data;
Professional software support na ule akụkọ nwere ike ịchekwa database ma ọ bụ Excel formats;
History ule data nwere ike queried, tụnyere, e biri ebi, kpara nkata na re-nyochaa.
Nka na ụzụ ọkọlọtọ
mmiri vepo Nzipu Rate Tester
DRK311 Air permeability Tester